Distrikan’i Manandriana: fianakaviana 6.000 hisitraka ny Asa Avotra Mirindra - ewa.mg
News - Distrikan’i Manandriana: fianakaviana 6.000 hisitraka ny Asa Avotra Mirindra
Hanatanterahana ny tetikasan’ny
governemanta malagasy, Asa Avotra Mirindra ny any amin’ny
distrikan’i Manandriana. Hisy, araka izany, ny fanamboarana
lakandrano mirefy 1.800m hanondrahana ireo tanimbary sy tanimboly
amina hektara maro iveloman’ny tantsaha any an-toerana .
Mahatratra 6.000 ireo fianakaviana hisitraka ity tetikasa Asa
Avotra Mirindra ity, izay avy ao amin’ny kaominina 10 ao amin’ny
distrikan’i Manandriana avokoa. Haharitra 2 taona ny tetikasa
hipaka eny ifotony.
Vatsin’ny banky iraisam-pirenena
ara-bola ny tetikasa ary iandraiketan’ny FID ny fanatanterahana sy
ny fandrindrana ary ny fisitrahan’ny mponina izany.
Nanara-maso ny fanombohana izany
asa izany ny minisitry ny Mponina, i Michelle Bavy Angelica.
Nitokana ny ivontoerana ho an’ny
fikambanam-behivavy tao amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana ihany
koa ny tenany. Tamin’izany no nilazana ny hanaovana fanisana ireo
fikambanana rehetra manerana ny fokontany sy ny kaomnina
ambanivohitra rehetra ao anatin’izany distrika izany.
L’article Distrikan’i Manandriana: fianakaviana 6.000 hisitraka ny Asa Avotra Mirindra a été récupéré chez Newsmada.
Aza mampihorohoro mpanao gazety
Nisesisesy indray ny herisetra nihatra tamin’ny mpanao gazety tamin’iny herinandro lasa iny. Nisy ireo voaendaka, rehefa nody alina avy niasa. Vao omaly indray no nisy niharan’ ny herisetra sy ny fanamparam-pahefana ataon’ny polisy.. Angamba, mety ho fifandrifian-javatra fotsiny ihany ireny tranga ireny saingy tokony hampisaina ny manam-pahefana isan’ambaratongany, indrindra fa hoe mpitandro filaminana miady amin’ny mpanao gazety. Tsy vao sambany no nisian’io herisetra amin’ny mpanao gazety io teto Madagasikara. Misy ireo efa voafelaka teny am-panaovana ny asany; misy ireo hitongavan’ny mpitandro filaminana any an-tokantranony; misy ihany koa no efa voaambana basy sy ny sisa. Ampy kosa izay e! Aza ampihorohoroana intsony ny mpanao gazety! Hafa kosa anefa raha sanatrian’ny vava, ka misy mpanao gazety tafiditra amina asan-jiolahy sy mpisoloky na asa ratsy hafa. Efa betsaka ihany koa mantsy amin’izao ireo mampiasa karatra hosoka hoentina hanaovan-dratsy. Na izany na tsy izany, tsy manakana ny mpanao gazety tsy hanao ny asany akory ireny rehetra ireny. Ny zava-misy marina tsy maintsy havoaka ho fanta-bahoaka. Tsy asiana amboako na amboan’olona eo fa rehefa vandana dia kary! L’article Aza mampihorohoro mpanao gazety est apparu en premier sur AoRaha.
Aleo hazava ny resaka fa tsy ilay adikan’ny sasany hoe: “dondrona” akory ny hevitry ny donto fa manakaiky amin’ny hoe: “tsy mahare na inona na inona intsony noho ny zavatra na tranga nihatra taminy”. Rehefa ny zaza no maty vono sy voakapo-dava, manjary donto ka tsy handray anatra intsony. Raha ny lehibe no donton’ny eboebo, tsy mahatsapa esoeso. Ohatra ihany izany fa maro be ireo mety hitarika ny olona ho donto.Tafalatsaka ao anatin’izany fahadontoana izany ihany koa ny zavakanto sy ny kolontsaina malagasy. Tsy andairana torohevitra intsony ny sehatra sasany, hany ka manohy hatrany ny lalan-diso alehany. Ambara fa ampy sy sahaza ny Malagasy ny fiteny malagasy, ny an-dry zareo efa donton’ny fiteny vahiny tsy mety raha tsy laroina izany rehefa miresaka. Aza mba donto ihany! Efa fantatra ao anatin’ny fahendrena malagasy fa “aza ny lohasaha mangina no jerena fa Zanahary an-tampon’ny loha”. Ny an-dry donto isany manjary “angalaro fa tsy misy mahita”.Tsy mba azon’io fahadontoana io ny Malagasy fahiny, noho izy nahay nampifandrindra tsara ny fiainany tamina lamina voajanahary. Tsy nogejain-javatra “hafahafa” tahaka ny eboebo, voninahitra, sns, izy ireo, hany ka tsy nety donto fa nanana faharanitan-tsaina lehibe sy fahatsapan-tena goavana.Manana ny maha izy azy ny Malagasy fahiny. Saingy, niova tsikelikely ny sasany tamin’izany rehefa nanomboka niha“donto” izy. Tsy nandaitra taminy intsony ny fahandren-drazana rehefa donton’ny “fandrosoana” ny ampahana Malagasy. Tsy henon’ny sofiny intsony ny “firaisankina no hery” ka nosoloiny “samy maka ho azy”. Tsy takatry ny sainy intsony fa “manody ny zava-drehetra”, sns.Mety mitombo isa andro aman’alina ireo Malagasy tafiditra ho anisan’ny donto (tsy mahare na inona na inona), raha tsy miverina manokatra ny masom-panahiny (fahendrena malagasy: Ny fanahy no maha olona) ny tsirairay!HaRy RazafindrakotoL’article FAKAFAKA: Aza mba donto ihany! a été récupéré chez Newsmada.
Asan-jiolahy tany Ambositra :: Tsy mbola votsotra ilay zaza roa taona nisy naka an-keriny
Roa volana mahery aty aoriana, voalaza fa tsy mbola tafaverina amin’ny fianakaviany Andriamiharisoa Jean Olivier na i Toky, zazalahikely, roa taona, nisy naka an-keriny tany Ankeniheny, Ambositra, tamin’ny 10 mey lasa teo. “Mitohy ny fikarohana sy ny fanadihadiana rehetra”, hoy fotsiny ry zareo mpanao famotorana. Tsy nahazoam-panampim-panazavana ihany koa ny fizotran’ny asa ratsy ka nahavery an’io zaza io. Ny fikambanan’ireo Karàna mizaka ny zom-pirenena frantsay eto Madagasikara (Cfoim) no nahafantarana fa tsy lavitra ny trano fonenany, tao Ankeniheny, no nakan’ireo olon-dratsy an-keriny an’ilay zazalahy. Nambaran’ity loharanom-baovao ity hatrany ny fisian’ny fitakiana vola nataon’ireo mpaka an-keriny ho takalon’ny famotsorana azy. Efa nanaparitaka ny filazana momba an’izao raharaha fakàna an-keriny an’Andriamiharisoa Jean Olivier izao ny fikambanana Cfoim. Azo antsoina ny laharana finday 032 21 121 21/ 033 31 121 21/034 81 121 21 ho an’izay manana fanampim-baovao marim-pototra. L’article Asan-jiolahy tany Ambositra :: Tsy mbola votsotra ilay zaza roa taona nisy naka an-keriny est apparu en premier sur AoRaha.
Donia 2019 an-tsary
Sary sy soratra: Zo ny Aina RandriatsiresyL’article Donia 2019 an-tsary a été récupéré chez Newsmada.
Fisehoana teny amin’ny HJRA :: Nandray ny fanomezana frantsay ny minisitra Ahmad Ahmad
Kisendrasendra sa paikady napetraka sy hanaporofoana zavatra nanoloana ny resabe nandeha momba azy? Nandray ny fanomezana kojakoja hoenti-miatrika ny valanaretina Covid-19 avy amin’ny fanjakana frantsay, tetsy amin’ny Hopitaly Joesph Ravoahangy Andrianavalona ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, profesora Ahmad Ahmad, omaly. Nandrasan’ny mpanara-baovao ny ho avin’ity minisitra ity, ny ampitson’ny fivoahan’ny taratasin’ny governemanta, izay nanakiana ny taratasy nosoniaviny sy nalefany tany amin’ireo mpiara-miombon’antoka vahiny momba ny fangatahana fitaovana sy kojakoja amin’ny ady amin’ny valanaretina eto Madagasikara. Tranga roa ihany no azo tombantombanana: na niravona ny disadisa naterak’ireny taratasy roa samy hafa ireny, na nihilana tany amin’ingahy minisitra ny mizanan’ny fananana ny rariny, indrindra fa ady amin’ny valanaretina no atrehin’ny firenena ankehitriny fa tsy ady amin’olona na vondron’olona na antokon’olona. Nifanindran-dalana tamin’ ny fiandrandran’ny mpanarabaovao ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fanjakana mantsy, dia fanendrena governera sy tompon’andraiki-panjakana ambony no isan’ny fanapahankevitra politika noraisina nandritra ny Filankevitry ny minisitra, omaly hariva. Am-perinasa ary toa vao mainka nanamafy ny sezany ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, tamin’ny alalan’ity fandraisany ny fanomezana frantsay, tetsy Ampefiloha, omaly, ity. Fanohanan’ny federasiona sendikaly Fitaovam-pisefoana « Mak’Air » miisa efatra ambin’ny folo no natolotry ny masoivoho Frantsay eto Madagasikara tamin’ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka sy ny talen’ny HJRA, Profesora Rakoto Alson Olivat. Na fanampiny amin’ireo fitaovana ilaina amin’ny fitsaboana an’ireo mararin’ny Covid-19 ireo azon’ny fanjakana malagasy ireo, na fanentsenana an’izay banga tokoa. Tetsy andaniny dia naneho fankasitrahana nanoloana an’iny taratasin’ny minisiteran’ ny Fahasalamam-bahoaka izay niteraka disadisa tao anatin’ny governemanta iny ny Federasiona sendikalin’ny minisiteran’ny Fahasalamana. Nanaporofo ny mampitombina ny fangatahana sy ny fitakiana nataon’ny sendika hatramin’izay izany taratasy izany, araka ny fanambaràna nataon’ity Federasiona ity, omaly. Na izany aza, milaza ho tsy miady amin’ny fanjakana izy ireo fa miady amin’ny valanaretina ka miantso an’ireo lafin-kery hifanome tanana. L’article Fisehoana teny amin’ny HJRA :: Nandray ny fanomezana frantsay ny minisitra Ahmad Ahmad est apparu en premier sur AoRaha.
Teny Alasora teny, tovovavikely vao 15 taona monja, niharan’ny fanolanana nandritra ny fanafihana sy ny fandrobana ny tranon’ny ray aman-dreniny. Teny Ivato, roa vavikely vao dimy taona, sendra tratra hariva nitady ny ray aman-dreniny, voaolan’ny tovolahy iray. Any Imerintsiatosika sy ny manodidina, iharan’ny fanolanana ny zaza amam-behivavy amin’ireo tokantrano tafihin’ny jiolahy… Lava ny lisitra. Vao ny eto Antananarivo sy ny manodidina ireo fa hafa koa ny tranga miseho any amin’ny faritany. Mirongatra dia mirongatra tato ho ato ny herisetra sy ny fanolanana atao amin’ny zaza amam-behivavy, indrindra amin’ny ankizy tsy ampy taona.Matetika, tsy maintsy arahina fanolanana ny asa fandrobana sy fanafihana ataon’ny jiolahy. Indraindray aza, miafara mihitsy amin’ny vonoan’olona. Efa hita ihany ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana iadiana amin’ny tsy fandriampahalemana sy ny vokatra azo amin’izany. Ny etsy, voasambotra, aiditra am-ponja; ny eo, misosoka ihany, toa tsy misy fitsaharany. Saika isan’andro mihiratra no andrenesana trangana fanolanana hatraiza hatraiza.Inona loatra re ny mahatonga izany? Mety ho maro ny antony fa izay tiana hasongadina kely eto ny tsy fahafantaran’ny vahoaka lalàna, ireo karazan-keloka, indrindra ny heloka bevava sy izay sazy mifanandrify amin’izany. Mba firy amintsika izao, ohatra, ny mahafantatra fa ny atao hoe fanolanana dia firaisana ara-nofo, na inona na inona karazany, natao tamin’olon-kafa tamin’ny alalan’ny herisetra, ny fanerena, fny andrahonana tampoka? Azo heverina fa vitsy koa ny mahalala fa “heloka bevava mahavoasazy an-terivozona dimy hatramin’ny 20 taona ny fanolanana zaza 15 taona no ho midina”… Eny, fa na eo amin’ny mpivady aza, sokajina koa ho heloka ny fanolanana.Tsy ampy dia tsy ampy ny fampahafantarana ny lalàna amin’ny olom-pirenena eto amintsika. Indrindra ny lalàna momba ny heloka bevava, raha tsy hilaza afa-tsy izay, izay hita ho mirongatra dia mirongatra, araka iry voalaza etsy ambony iry. Heverina anefa fa fomba iray mety hiadiana amin’ny fandikan-dalàna ny fahafantaran’ny maro izany. Eo indrindra ny hanairana ny sain’ny fitondrana, ny minisiteran’ny Fitsarana… Manana andraikitra amin’izany koa ny fikambanana samihafa, ny firaisamonim-pirenena. Tena adidy amin’andraikiny mihitsy izany. Izay ilay hoe fanabeazana ho olom-pirenena vanona. Sao lahy varimbarian’ny lavitra ka tsy mahita ny ambany maso. Variana amin’ity adilahy politika tsy mampandroso ity.Mamy Randrian L’article Varimbarian’ny lavitra… a été récupéré chez Newsmada.